Ngathi | I-Guangzhou Ouyan Hardware jewelry jewelry Co., Ltd.
Inkampani yaseGuangzhou Ouyan yobucwebe beentsimbiukuseta okungacwangciswanga kunyaka we-2010, ukuvelisa izacholo zamadoda ngaphezulu kwamava e-10years, kubandakanya izindandatho, izacholo, isacholo somqala kunye ne-tungsten, i-stainless, i-ceramic, kunye ne-titanium. I-moq esezantsi yokwenza ilogo yabathengi, eyona ntengiso iphambili i-USA, iYurophu, i-Egypt njl.njl ne-OEM / i-ODM, ukuhambisa ngokuthoba kwamkelekile.
Yintoni esinokuyenza kubaxhasi:
Nesingxobo umbala Ceba, igolide epheleleyo, i-IPG igolide, umpu, uMnyama (i-Ion plating, ayizukuphela kwi-3years)
Ubungakanani Ngokwesicelo sakho.
Ilogo Ngaba laser uprinte logo yakho ngokwesicelo sakho
Ukupakisha Ivale kwangaphakathi: 1pcs / ingxowa opp 50pcs / ibhokisi Foam, ivale engaphandle: 500-1000pcs / ibhokisi
I-OME kunye ne-ODM Yamkelwe
Ixesha lokuzisa 25-30days emva kokuqinisekisa
Ixesha leSampula 1-7 iintsuku zomsebenzi
Ukuhambisa ngenqanawe I-DHL, i-UPS, i-EMS, i-Fedex, i-TNT, njl.
Immimiselo yokuhlawula T / T, umanyano lweNtshona, iPaypal.
Iisampulu Ukuthumela iisampulu kuqala kuvavanyo lomgangatho kuyafumaneka
Isampulu yoku-odola 100% intlawulo phambi imveliso
Ulungelelwano lwangempela hlawula i-30% yedipozithi kwangaphambili, i-70% eseleyo kufuneka ihlawulwe ngaphambi kokuhambisa
1.Ukulawulwa kwesampulu, asizukuqala ukwenza iimveliso de uqinisekise isampulu.
2. Zonke iimveliso zakho ziya kwenziwa ngabasebenzi abanezakhono.
3. Siza kuvelisa iimpahla ezi-2 ~ 5% ngaphezulu ukubuyisela endaweni iiMveliso eziGwenxa.
4. Ukupakisha kuya kuba bubungqina bothusayo, ubungqina obumanzi kunye nokutywinwa.
2. Ukuba kukho nawuphi na umbuzo nceda usazise okokuqala nge-imeyile okanye ngomnxeba. Sinokujongana nabo ngexesha.
3. Siza kuthumela izitayile ezininzi ezintsha veki nganye kubathengi bethu abadala.
4. Ukuba iimveliso zonakalisiwe emva kokuba ufumane iimpahla, siya kukubuyekeza emva kokuba uqinisekise ukuba unoxanduva lwethu.
Yintoni izinto ekufuneka sizenzile ukwenza amakhonkco:
I-titanium yeBakala 2, i-316L intsimbi engenasici, i-Tungsten, i-Ceramic, i-Liquid titanium, i-Silicone, ilitye le-Lava rock ekukhetheni iBakala 2 titanium, i-316L intsimbi engenasici, i-Tungsten, i-Ceramic, i-titanium ye-Liquid, i-Silicone, ilitye le-Lava ilitye lokukhetha.
Yintoni ubugcisa beeringi esinokuzenza:
High olukhazimlisiweyo, sandblasting, Mat, IPG, laser, yesikhumba, Carbon ifayibha, gummy, ukroliwe, electroplated, Epoxy (umsebenzi ngesandla), umsesane omnye unokuba kunye 30crafts.
imitya yomtshato yamadoda tungsten emnyama, Imisesane Yomtshato Idayimane Negolide, Imisesane yamadoda amaTungsten aMnyama, Iringi yeTungsten, Ubungakanani beRingi yeTungsten 15, I-Tungsten yeTitanium yeringi 8mm,